जीवनी र खगोलविद् चार्ल्स मेसियरको आविष्कारहरू | नेटवर्क मौसम विज्ञान
आज हामी एक खगोलविद्को बारेमा कुरा गर्ने छौं जुन इतिहासमा एकदम महत्त्वपूर्ण थियो। बारेमा चार्ल्स मेसियर। निकोलको मेसिएर र फ्रान्कोइज बि। ग्रान्डब्लाइसको बिहे भएको १२ बच्चाहरुमा उनी दसौं थिए। उनका बुबा साल्मको रियासतमा प्रहरी अधिकृत थिए। यसले परिवारलाई बनायो, असंख्यको बाबजुद, आरामसँग बाँच्नको लागि। यसरी चार्ल्स मेसियरले आफूलाई खगोल विज्ञानमा समर्पित गरे।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई चार्ल्स मेसिअरको जीवनी बताउन जाँदैछौं ताकि तपाईले पत्ता लगाउन सक्नु हुन्छ कि उनको बिज्ञान विज्ञानको संसारमा के थियो।
2 चार्ल्स मेसियरको शोषण
3 सब भन्दा महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरू
ती १२ भाइबहिनीहरूमध्ये 12 जनाको अकालमै मृत्यु भयो। ११ वर्षको उमेरमा, चार्ल्सको बुबाको मृत्यु भयो र उहाँ टुहुरो हुनुभयो। जैसिन्टो नाम गरेका २-वर्षीय जेठो भाइले परिवारको प्रमुखको भूमिका लिए र आफ्नो भाइ चार्ल्सको शिक्षाको हेरचाह गरे र हेरचाह गरे। सुरुमा, ज्याकिन्टो आफ्नो कान्छो भाई पनि तिनीजस्तै भएको चाहन्थे। उनको लक्ष्य रियासतको दरबारमा काम गर्नु थियो।
यद्यपि, चार्ल्सले चित्र बनाउन र अवलोकन गर्न ठूलो क्षमता हासिल गर्यो। यसले उनलाई फ्रान्सेली नौसेनामा खगोलशास्त्री शाहीको रूपमा १ 1751१ मा जागिर पाउन अनुमति दियो। यस काममा उसले केवल आकाश नक्शा तान्यो, तर भौगोलिक नक्शा पनि बनायो। यी नक्शा उनीहरूको समयको लागि अत्यन्त सटीक थिए जसले तिनीहरूको मालिकहरूलाई धेरै आनन्दित तुल्यायो। डेलिसेल नाम गरेकी एउटी महिला 60० को दशकमा थिइन र उनका कुनै बच्चा थिएन। यस कारणले गर्दा, उनले फ्रान्सको रोयल कलेजमा मेसियरलाई उनको घरमा स्वागत गरे।
उनी रोयल नेवीको अवलोकन टावरमा काम गर्दै थिए, जहाँ उसको आफ्नै अफिस थियो। उसले गरेको पहिलो ठूलो काम चीनको ठूलो नक्शा बनाउनु थियो। कुनै पनि प्रकारको उपग्रह वा प्लेन वा कुनै पनि चीज बिना नै कल्पना गर्नुहोस् जुन पूरा नक्सा बनाउन के हुन्छ राम्रोसँग हेर्नका लागि उडानमा उड्न सक्छ। पछि, उसले बुधको ट्रान्जिटका केही चित्रहरू पनि गरे र ताराहरूको ठ्याक्कै स्थितिको गणना र मापन पनि गर्न थाले। सौर्य प्रणाली.
यी खगोल विज्ञानमा चार्ल्स मेसियरको शुरुआत थिए। खगोलशास्त्रीय उपकरणहरू र उत्कृष्ट आँखाहरूका लागि उनीसँग बोल्ने ह्यान्डल गर्ने सीपले उनलाई एक महान दर्शक बनायो।
चार्ल्स मेसियरको शोषण
त्यस समयमा यो आशा गरिएको थियो कि ह्याली धूमकेतु, धेरै द्वारा घोषणा गरिएको एडमंड हली। यसको कक्षा पृथ्वीको नजिक फेरि पास हुनु पर्ने थियो र देख्न सकिन्थ्यो। यस खगोलविद्को लागि यस धूमकेतुको खोजी प्राथमिकताहरू मध्ये एक बन्न गयो। उनले यसमा आफूलाई समर्पित गरे र आफ्नो जीवनभरमा २० नयाँ धूमकेतुहरू पत्ता लगाए। सबै भन्दा पहिले 1758 मा थियो।
डेलीले संगै मेसेयरले त्यो वर्ष एक धूमकेतु पत्ता लगाए। पछि, वृषभ नक्षत्रको ट्र्याक गर्दा उनीहरूले महसुस गरे कि त्यहाँ एउटा अस्पष्ट चीज थियो जुन धूमकेतु जस्तो देखिन्थ्यो। त्यसोभए तिनीहरूले यो पत्ता लगाए कि उनीहरूले पत्ता लगाएका चीजहरूaहो भनेर अर्को अवलोकन पनि भयो नेबुला.
वर्षौंपछि उसले दुई नयाँ धूमकेतुहरू फेला पारे र उनीहरूको नाम १ 1763 मेसियर र १ 1764 Mess मेसियर, खोजकर्ता र मितिको सम्मानमा राखियो। डेलीस्ले प्रत्यक्ष आदेशमा, उसले १ 1682२ मा हेलीको धूमकेतुको मार्ग देखाउँदै नक्शा कोर्न सके। उसको मालिकको गलत हिसाब थियो र उसले १ Hal महिनासम्म हेलेको धूमकेतुको खोजीमा कुनै सफलता हासिल गरेन। कमसेकम यसले उसलाई अर्को नयाँ धूमकेतु फेला पार्न मद्दत पुर्‍यायो।
अन्तमा, चार्ल्स मेसिअरले जनवरी २१, १ 21 on मा हेलीको धूमकेतु पत्ता लगाउन सक्षम भए। यो आकाशका क्षेत्रहरूमा डेलीसलले दिएको गणना भन्दा फरक देखियो। उसले आफ्नो वार्डलाई खोज्ने कुराकानी गर्न अनुमति दिदैन ताकि त्यसमा योग्यता छैन। १ 1765 मा डेलीसेले रिटायर भए, जबकि मेसियरले नयाँ भटकने ताराहरूको खोजीमा आकाश अवलोकन गर्ने आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिए।
उसले प्रयोग गर्ने उपकरणहरू धेरै न्यून गुणको भएकोले उसले धमिल्दो वस्तुहरू फेला पारे जुन उनले धूमकेतुहरूको लागि गलत गर्‍यो। फेरि तिनीहरूलाई भ्रमित न गर्न को लागी, उनले यसलाई संख्यामा वर्गीकृत गरे र यसको स्थितिको संक्षिप्त वर्णन गरे। यस तरिकाले, जब उसले केहि नयाँ फेला पारे, उनले एनोटेटेड डाटालाई समीक्षा गर्न सक्दछ कि यदि यो पहिले नै केहि थियो जुन पहिले उसले पहिले नै गर्यो कि थिएन।
वृषको नक्षत्रमा फेला पारिएको यसको पहिलो वस्तुलाई M1 भनिन्छ।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरू
फेम १ France1768 of मा फ्रान्स बाहिर फैलियो। यसको लागि उनलाई लन्डनको रोयल सोसाइटीमा भर्ना गरियो। पछि प्रशियाका राजाले बर्लिन एकेडेमीमा भेट्नको लागि स्वीकृति दिए जसलाई उसले बनाएको धूमकेतुको ट्र्याक्टोररीको मानचित्र थियो र उसले आफैले खोजेको थियो। उनी पनि स्टॉकहोम मा स्विडेनी एकेडेमी को सदस्य नियुक्त भयो।
उनले 40० वर्षको उमेरमा -० वर्षको उमेरमा मारि-फ्रान्सेइज डे भर्माचैम्प्टसँग विवाह गरे। दुर्भाग्यवस, उनको व्यक्तिगत जीवन उनको छोराको जन्मबाट ग्रस्त हुन थाले, किनकि उनकी श्रीमती नवजात शिशुको साथ मरे। नोभेम्बर १37१ मा उहाँ एउटा गम्भीर दुर्घटनामा पर्नुभयो जब उहाँ बरफको छालमा खस्नुभयो। यो खस्नाले उसको खुट्टा र पाखुरामा फ्र्याक्चरका साथै धेरै भाँचिएका करbsहरू पनि निम्त्यायो। यसले उनलाई लगभग एक वर्ष आफ्नो अवलोकनहरू गर्न सक्षम नगरी छोडियो। पछि उनले सौर डिस्क भन्दा अगाडि बुधको ट्रान्जिटको अध्ययन गरे।
अन्ततः, १ 1784 मा, उनले मेसेयर क्याटलगको आफ्नो चौथो र अन्तिम संस्करण १० published वस्तुहरूसँग प्रकाशित गरे। उनले डब्लिन एकेडेमी अफ साइंसेज (१ 1784 )1785), एकेडेमी अफ स्टेनिस्लाव, न्यान्सी, लोरेना (१ 1788), र स्पेनको भेगारा एकेडेमी (१ XNUMX) बाट पनि नियुक्ति पाए।
पहिले नै १1801०१ मा ऊ अन्तिम परियोजनाको एक हिस्सा थियो जसमा उसले आफ्नो अन्तिम धूमकेतु पत्ता लगायो जसलाई पोन्स धूमकेतु भनेर चिनिन्थ्यो। आफ्नो उमेर को कारण, उहाँ पहिले नै केहि टिप्पणिहरु गर्नुभयो र सेरेब्रल इन्फेक्शनको १ 1815१ in मा उनको मृत्यु भयो। ऊ निको हुन सकेन किनकि यसले उसलाई आंशिक रूपमा पक्षाघात भएको थियो उनको Paris 87 वर्षको उमेरमा पेरिसको आफ्नै घरमा निधन भयो।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, चार्ल्स मेसेयरले खगोल विज्ञानमा धेरै योगदान गरेका छन र सधैं सम्झन सकिन्छ। मलाई आशा छ कि यस जानकारीले तपाईंलाई यस वैज्ञानिक र उसले गरेका सबै पराक्रमहरूको बारेमा अझ बढी सिक्न मद्दत गर्दछ। आजसम्म यो असंख्य खगोल विज्ञान सम्मेलनहरूमा उल्लेख गरिएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » चार्ल्स मेसियर